Tag: mgbanwe dijitalụ | Martech Zone
Tag: mgbanwe dijitalụ
6 Ihe Nlere nke Uzo ahia di itoru n’oge oria ojoo a
Na mbido ọrịa a, ọtụtụ ụlọ ọrụ belatara mgbasa ozi ha na azụmaahịa ha n'ihi nbelata ego ha na enweta. Businessesfọdụ ụlọ ọrụ chere na ọ bụ n'ihi ịchụpụ ndị ahịa, ndị ahịa ga-akwụsị mmefu ka mgbasa ozi na mmefu ego wee belata. Companieslọ ọrụ ndị a akpakọtara na nzaghachi maka nsogbu akụ na ụba. Na mgbakwunye na ụlọ ọrụ na-ala azụ ịga n'ihu ma ọ bụ ịmalite mkpọsa mgbasa ozi ọhụụ, ụlọ ọrụ telivishọn na redio na-agbasi mbọ ike iwebata ma debe ndị ahịa. Genlọ ọrụ na ahịa
Mgbe ụlọ ọrụ m nyere aka ma mee njem mgbanwe dijitalụ na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, anyị na-elekwasị anya na mpaghara 3 dị mkpa - ndị mmadụ, usoro, na nyiwe. Mgbe ahụ, anyị mepụtara ọhụụ na ụzọ iji nyere ụlọ ọrụ ahụ aka ịmepụta ma rụọ ọrụ nke ọma yana gbanwee ahụmịhe ndị ahịa na mpụga. Ọ bụ nkwekọrịta siri ike nke nwere ike were ọtụtụ ọnwa, na-etinye ọtụtụ nzukọ na ndị isi na nyocha miri emi nke data, nyiwe, na njikọta nke azụmahịa ahụ dabere.
Thursday, August 27, 2020 Tọzdee, Septemba 17, 2020 Ugochukwu Sriram
Ọchịchọ bụ asụsụ ụwa niile. Igbe nchọta ahụ bụ n'ọnụ ụzọ azịza gị niile. N'ụlọ ị na-arọ nrọ ụbọchị banyere ihe ndina ọhụrụ maka ụlọ gị? Google kachasị mma ihi ụra maka obere ụlọ. Na-arụ ọrụ na-agbalị inyere ndị ahịa aka ịghọta nhọrọ ndenye aha ha? Chọọ intranet gị maka ọnụego dị ugbu a na nkọwapụta iji kesaa ha. Na arụmọrụ kacha elu, chọọ ma chọgharịa na akara elu na ala. Ndị ahịa zụta karịa ma nọgidesie ike,